Maraykanka oo cabsi ka qaaday gantaal Woqooyiga Kuuriya tijaabisay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maraykanka oo cabsi ka qaaday gantaal Woqooyiga Kuuriya tijaabisay
Milatariga dalkaasi Maraykanka ayaa sheegay inay cabsi ka qaadeen gantaal aad u dheereeya oo ay tijaabisay Waqooyiga Kuuriya usbuucii hore. Gantaalkan oo ah nooc casriya ayaa aad uga dheereeya dhawaqa caadiya.
”Isla markii Waqooyiga Kuuriya tijaabisay gantaalkaas xawaaraha dheereeya ee lagu ganay dhinaca badda waxaan markiiba la boobnay difaac milatari ahaan iyo duulimad ahaanba inaan fiirino inuu nagu soo wajahnaan karo ayuu yiri sarkaal u hadlay milatariga dalkaasi. ”Runtiina ma sheegi karo inaan iska difaaci karno iyo in kale ayuu raaciyay.
Dhinaca kale waxa iyana markiiba la hakiyay diyaaradaha kici lahaa kuwa socdana looga digay in is difaac la gali karo. ”Waxaan hakinay diyaarado kici lahaa waana hawl caadiya marka ay jiraan gantaal la tijaabinaayo uu ku soo wajahnaan karo Maraykanka ayuu yiri sarkaal u hadlay waaxda socdaalka.
Waxase milatarigu markii dambe ogaaday in gantaalku ku dhacay meel aan uba dhawayn xadkooda oo u dhaxaysa Shiinaha iyo Jabaanka. Waqooyiga Kuuriya ayaa horumar weyn ka samaysay dhinaca gantaalaha ridada dheerna, ayadoo hadda u baahnayn gantaal rido dheer maadaam aya haysato gujis ay ku garacaaci karto Maraykanka.
Gabadh Muslima oo ka badbaaday kufsi Tigree kula kacay oo la abaal mariyay
Ikraan Yaasiin oo gabadh Muslima oo deganayd gobolka ...